के विप्लव ओली पक्षको जनसभामा देखिन्छन् ? « Ok Janata Newsportal
के विप्लव ओली पक्षको जनसभामा देखिन्छन् ?
काठमाडौं । यतिबेला ओली पक्षको जनसभालाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न भ्रमहरु फैलिएका छन् ।
बिहीबार मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा नामको फेसबुक आइडीबाट माघ २३ गते हुने ओली पक्षको जनसभा विविध कारणले स्थगित भएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गरियो तर, त्यो सत्य थिएन ।
अहिले उक्त कुरालाई ओली पक्षले झुट सन्देश भएको र यसका पछाडि नलाग्न बताइसकेको छ । यतिमात्र होइन आजको ओली पक्षको जनसभामा प्रतिबन्धित समूहका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको समेत सभामा उपस्थिति रहने र नेकपामा प्रवेश गर्ने हल्ला सामाजिक सञ्जालमा फैलाइएका छन् । तर, त्यो कतिको सत्य हो कतैबाट पुष्टि भएको छैन ।
यसरी हेर्दा बढ्दो आधुनिकतासँगै विभिन्न भ्रमहरु पनि मानिसको हातहातमा पुग्न थालेको छ । जसले एकपटक सोच्न बाध्य बनाउँछ ।
विकसित देशहरु अमेरिकालगायतका ठाउँमा अहिले डिफेकको बढ्दो प्रयोग भएको पाइन्छ । आफूले नभनेको कुरालाई समेत भनेकै हो भन्ने पार्नलाई निश्चित मान्छेको जीउडाल, बोली हाउभाउलाई समेत नक्कली बनाउन सकिन्छ ।
यसरी राजनीति गर्ने व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्न सजिलो पारिदिएको छ । राजनीति गर्ने मान्छेले गाली र ताली सहन जानेको हुन्छ तर, सामान्य मानिसको जीवनमा यस्ता प्रविधिको अनर्गल प्रयोग हुने हो भने स्थिति भयावह हुने देखिन्छ ।
पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा पनि डिफेकको बढ्दो प्रयोग छ । हिजैमात्र नेकपा (दाहाल–नेपाल पक्ष)ले गरेको आमहड्तालमा तरकारी फ्याँकेको दृष्य देखाइएको थियो तर त्यो नेपालको नभइ भारतको किसान आन्दोलनमा फ्याँकिएको तरकारी थियो ।